Wakhtiga Doorashada Madaxweynaha iyo Wakiilada Galmudug? – Kalfadhi
Guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad gobaleedka Galmudug ayaa soo saaray jadwad ku saabsan hanaanka iyo waqtiga doorashada wakiilada iyo mida Madaxweynaha.
Warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiska guddiga ayaa lagu xusay in dhismaha Galmudug lagu soo gaban gabeen doono ilaa 9- January 2020-ka maalinkas oo ku beegan maalinta la dooran doono Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Doorashada Galmudug ayaa waxaa hareeyay khilaaf u dhaxeeyay dowladda iyo maamulka Ahlusuna. Doorashada ayaa waxaa ay dib u dhacday dhowr jeer.
Dowladda Mareykanka ayaa soo dhoweysay heshiis ay labada dhinac ka gaareen khilaafkii u dhaxeeyay.
Musharaxiinta ka qeybgalleysay doorashada ayaa dhowr jeer waxaa ay dowladda ku edeeyeen in ay dooneysay In ay afduubato doorashada.